निम्तोको दु:खले पनि रक्तदानलाई रोक्न सकेन - Vishwa News
अर्जुनप्रसाद मैनाली / न्यूयोर्क
पृथ्वीको भुमध्य रेखामा रहेको अफ्रिका महादेशको करिब मध्य भागमा संसारकै गरिब देश हो कंगो । प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले भने कंगोलाई बिश्वकै धनी देशमा गन्न सकिन्छ । त्यहाँ भएका खनिजहरु निकाल्ने हो भने २४ ट्रिलियन युएस डलर भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तर उपनिवेशवाद, दासत्व, र भ्रष्टाचारले यो देशलाई सबैभन्दा गरिव बनाएको छ । दोश्रो विश्व युद्धसँगै जोडिएर बल्झिएको हत्या हिँसा अहिलेसम्म सकिएको छैन । त्यहाँको जनसंख्या करिब ९ करोड र वार्षिक बजेट ७८ बिलियन अमेरिकी डलर छ । प्रतिब्यक्ती आम्दानी वार्षिक ८७० अमेरिकी डलर छ । नेपालको जनसख्या ३ करोड र वार्षिक बजेट ८४ बिलियन अमेरिकी डलर छ । तुलना गर्दा नेपालको प्रतिब्यक्ती आम्दानी वार्षिक ९१९ अमेरिकी डलर छ । हाल विश्वकै धनी देश संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनसंख्या ३२ करोड, वार्षिक बजेट २० ट्रिलियन र प्रतिब्यक्ती आम्दानी ६२ हजार डलर छ । अहिलेको हवाइजहाजको बाटो अनुसार अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट कगो पुग्न २० घण्टा लाग्छ भने नेपालबाट १६ घण्टा लाग्दछ ।
हरेक बर्ष अफ्रिका महादेशमा ६ लाख गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको अत्यधिक रक्तश्रावका कारणले मृत्यु हुने गरेको छ । त्यस्ता बिरामीहरुले सजिलै रगत पाउन सकेका छैनन । कुपोषण, बिभिन्न रोग लागेका कारण धेरै जसो रक्तदान गर्न सक्ने अवस्थाका छैनन । बाँकी रहेका केही स्वस्थ खालका युवाहरु रगत दिन डराउँदा रहेछन । अझ ‘मेरो शरीरको रगत अरुलाई किन दिने’ भन्ने सोच्दा रहेछन । केहीले दिइ हाले पनि ‘सित्तैमा किन दिने ?’ सोच्दा रहेछन ।
यति बुझिसक्दा मैले अब अल्पबिकसित देशहरुमा रक्तदान अभायान बृद्धी गर्नु पर्छ भन्ने सोचें । अफ्रिकी देशहरु मलावी, युगान्डा, इथियोपिया, रुवान्डामा गएर आफ्नै रगत दान गरी केहीलाई भए पनि बचाउन प्रयास गरें । अफ्रिकाकै कंगोमा संसारकै उच्चतम मातृ मृत्युदर छ । त्यस्तै दोश्रो उच्चतम शिशु मृत्युदर छ । महिलाहरुलाई धेरै दु:ख छ । बलिया पुरुषहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि महिलाहरुको इच्छा बिपरित दासी, बलात्कार, यौन शोषणगर्दा रहेछन । गरिबीले घरमा खानेकुरा नपुग्ने र जुटिहाले पनि महिलाको भागमा थोरै पर्दो रहेछ ।
कंगोको यस्तो अवस्था थाहा पाए पछी सेप्टेम्बर ११, २०१९ मा त्यहाँ पनि गएर रक्तदान गरौँ भन्ने मनमा आयो । तीन महिना अगाडि मात्रै रुवान्डामा गएर रक्तदान गरेको थिएँ । रगत नै नपाएर संसारका कुनै पनि कुनामा कसैले पनि जीवन गुमाउनु नपरोस भन्ने मेरो चाहना हो । यद्यपी कहिलेकाँही थकिन हुन्छु । कहिलेकाँही मलाई एकदमै बाध्यताले त्यहाँ गएर रक्तदान गर्नु परेको जस्तो हुन्छ । सधैं हर्यास ! सधैं प्रेसर ! यो मेरो कस्तो इच्छा हो ? यो मेरो कस्तो चाहना हो ? फेरी तमाम मेरा आफ्ना दुख र समस्यालाई थाती राखी आफुलाई सम्हाल्छु । र जुनसुकै कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो रक्तदानको काममा कमी ल्याउनु हुँदैन भन्ने भावनाले मन भर्दछु । यस्तो मनको आदेशमा कंगोमा नै गएर रक्तदान उत्प्रेरणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हुँ ।
कंगोमा गएर रक्तदान गर्ने मेरो योजना अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराएँ । अमेरिकी सरकारले आफ्नो नागरिकहरुलाई कंगोमा तत्काल नजान र गईहाले पनि सावधानी अपनाउन सुचना जारी गरेको रहेछ । कङोमा राजनीतिक द्वन्द, जातीय द्वन्द, लुटपाट, अपहरण, चोरी, हत्या जस्ता हिंसा हुदो रहेछ । बिस बर्षको अबधिमा ५४ लाखले अकालमै जीवन गुमाइ सकेका रहेछन । अझ एचआईभि एड्स, झाडा पखला, औलोको पनि उत्तिकै जोखिम रहेछ । यसका बावजुद मलाई त्यहाँ गएर रक्तदान दिन नै मन लाग्यो । मैले काम गर्ने कार्यालयका सहकर्मीहरुले कंगोमा जानु भनेको आत्महत्या गर्न जानु जस्तै हो भनेका थिए । मानिस जन्मे पछी एक दिन मरी नै हाल्छ । तर बाँची रहँदा अरुका लागि के गर्‍यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्यो । अरुका लागि मेरो रगत दिनु पनि म एक रक्तदाताको प्रतिभा निर्माण गर्नु जस्तै हो लाग्यो । यो कदमले अरुका लागि रक्तदान गर्न प्रेरणा पाउन सक्छन जस्तो लाग्यो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कंगोमा इबोला रोग धेरै नै बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रीय संघ संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको एक हप्तामै कंगोमा इबोला रोगको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले पदबाट जुलाई २३, २०१९ मा राजिनामा नै दिएका रहेछन । यस्तो थाहा पाए पछी जुलाई २५, २०१९ मा न्यूयोर्क स्थित कंगोको कन्सुलेटमा भिसाको लागि निवेदन दिएँ । त्यतिखेर मसँग न्यूयोर्कदेखि कंगोसम्म जान-आउन हवाइजहाज टिकट थिएन । बस्नको लागि होटेल बुक पनि गरेको थिइन । त्यसैले मेरो निवेदन स्विकृत भएन । मैले त्यहाँका अधिकृतलाई ‘तपाइले मेरो पासपोर्ट राम्रोसँग हेर्नु त भयो नि?’ सोधें । मैले अमेरिकन पासपोर्ट छ भनेर फुर्ती लगाउने कुरा पनि भएन । बिगत ६ बर्षमा १६ देशमा रक्तदान उत्प्रेरणा गराउन जाँदा लिएका भिषा र छापहरुले भरिएर पासपोर्टमा दुई पेजमात्र बाँकी थिए । निन्याउरो मुख लगाएर घर फर्किदा बाटोमा मनमा कुराहरु खेल्न थाले ‘कंगोमा रक्तदानबारे जनचेतना कम भएर चाहिने जतिले रगत दान गरी रहेको अवस्था छैन, म आफ्नै खर्चमा गई रगत दान गर्छु, रक्तदान गर्न उत्साह जगाउँछु भन्दा पनि भिषा नै दिएनन् !
भगवानले ‘तँ आँट म पुर्याउछु’ भने जस्तै मैले आटें । र त्यस कार्यको लागि समुदायका मेरा साथीहरुको आशिर्वाद र केही आर्थिक सहायता पाउन ‘गो फण्डमी’ कार्यक्रममा मेरो कुरा राखें । साथीहरुले सहयोग पनि गर्न थाल्नु भयो । गोफण्ड मार्फत (गोपेन्द्र भट्टराइ २५, राजन गौली १५, बसन्त चापागाइँ २०, रघु न्यौपाने २०, विश्व थापा २०, सलिल देवकोटा ५१, आरती राइ ५, हरिश हमाल १५, रेशम घर्ती १५, पशुपती पाण्डे १५, रोबर्ट एलिस २५, सुर्य लम्साल २१, दिनेश सन्ज्याल ५, राम ढकाल २०, प्रेम गुरूङ ५१, राम बिष्ट २०, शिव राइ २०, जगदिश राउत २०, भरत बास्कोटा १५, टिका ढकाल ५१, विश्व बास्तोला ५१, निराजन खड्का ५, पिपल मणी सिग्देल ५१) ५५६ डलर र ब्यक्तीगत रूपमा नगद नै सहयोग गर्नुहुने महेश खड्का १००, बिष्णु राना मगर १००, जंग पाल ५०, राधाकृष्ण देउजा २५, नारायण तिमिल्सिना २५, उद्धव हुमागाइँ ४०, उद्धव शास्त्री २०, मोहन बिष्ट ४०, जनक भण्डारी २१, रोनीश बिष्ट २० सहित जम्मा ९९७ डलर सहयोग गर्नु भएको छ। चाहिने रकम जुट्ने भएपछी साथी टिका ढकालसँग क्रेडिट कार्ड लिएर टिकट र होटेलको कोठा बुक गरें ।
मेरो कंगो जाने टिकटको करिव दुई घण्टा केन्यामा ट्रान्जिट थियो । त्यसैले म त्यही टिकटबाट केन्यामा ओर्लिन्छु भन्ने मनसायले एअरपोर्ट गएँ । तर एअरपोर्टमा मैले त्यो टिकटबाट यात्रा गर्न पाइनँ । मैले केन्याका रक्तदाताहरुको संस्था केही सहयोग गर्छु र आफ्नो दैनिकी खर्चको लागि छुट्याएको रकमबाट नै पुन अर्को टिकट किनेँ । कस्तो अचम्म भयो भने, पहिलेको टिकटमा भएको जस्तै मिती, समय र यात्रा तालिका नै उल्लेख भएको नयाँ टिकट पाएँ । ब्यापारमा कुनै पनि मानवीय सम्बेदनामा हेरिदो रहेनछ भन्ने मलाई लाग्यो । यहाँनेर म ठगिएँ । म बेखर्ची पनि भएँ । १२ हजार किलोमिटरको दुरिको १५ घण्टाको हवाइयात्रा भरी मेरो मन रोयो तर म हतोत्साहित भईनँ ।
नैरोबी, केन्याको एअरपोर्टमा मलाई स्वागत गर्न केन्याकी सर्बाधिक महिला रक्तदाता एैसा र पुरुष रक्तदाता अल्फा स्वागत गर्न आउनु भएको रहेछ । वहाँहरु संगै म त्यहाँको रक्तसन्चार नजिकैको होटेल हिलपार्कमा गएँ । न्यूयोर्कमा मैले वेबसाइटमा हेर्दा उक्त होटेलको रातको ७० डलर लाग्ने लेखेको थियो, तर त्यहा ११४ डलर लाग्ने बताए । होस, अब कता गएर बस्नु ? त्यसैमा बस्न फर्म भरेँ ।
केन्याको रक्त सन्चार सेवामार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले म रक्तदान नै गर्न भनेर न्युयोर्कदेखि नैरोबिमा आउने थाहा पाएपछी सरकारी अधिकारीहरूले पनि विशेष चासो राखेका रहेछन । किनभने उनिहरुले मेरो लागि त्यहाँ बसिन्जेलसम्म एउटा कार र ड्राइभर उपलब्ध गराएका थिए । त्यस अबधिमा म जहाँ जान पनि उक्त सुबिधा प्रयोग गर्न सक्थेँ । त्यसदिन बेलुका एनआरएन केन्याको पदाधिकारीहरुले मेरो लागि आयोजना गर्नु भएको रात्री भोजमा सहभागी भएँ । उहाँहरुलाई आफ्नो अनुकुलमा सानै भएपनी रक्तदान कार्यक्रम गर्न अपिल गरेँ । विश्व ब्यापी रुपमा मेरो रक्तदान अभियानको काम र कुरा बारेमा जानकारी गराएँ ।
केन्याको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेरो लागि बिशेष कार्यक्रम नै बनाएको रहेछ; सम्भाबित रक्तदाता उपस्थित हुने समय, म कार्यक्रममा पुग्ने समय, केन्याकी सर्बाधिक रक्तदाता महिलाको मन्तब्य, केन्याको सर्बाधिक पुरुषको मन्तब्य, मेरो मन्तब्य, स्वास्थ्य मन्त्री (क्याबिनेट सेक्रेटरी) सिसिली कारीउकीको मन्तब्य, उपस्थित भएका हरुले मसँग फोटो खिच्ने समय, संचारमाध्यमसँग अन्तरवार्ता र मेरो रक्तदानको समय निर्धारण गरेको थियो । अझ उनिहरुले म रक्तदान नै गर्न भनेर अमेरिकादेखि केन्यासम्म आउन लागेको भनेर राष्ट्रिय पत्रीका ‘डेली नेशन’मा अधिल्लो दिनमा समाचार नै छापेका रहेछन ।
सोही अनुरुप म भोलिपल्ट बिहान १० बजे राष्ट्रिय अभिलेख मैदान, नैरोबीको प्राङणमा आयोजित कार्यक्रम स्थलमा पुगेँ । दुई वटा ठुला पालहरु टाँगिएका थिए । औपचारिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाईएको रहेछ । सयौँ सर्ब-साधारण र सम्भावित रक्तदाताहरुको उपस्थित रहेको थियो । ठीक ११ बजे मन्त्रिको आगमन भयो । लाइनमा म भन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयका दुई बरिष्ठ पदाधिकारीहरु हुनुहुन्थ्यो र म तेश्रो नम्बरमा उभिएको थिएँ अनी सयौँ सर्वसाधारण, सम्भावित रक्तदाता र करीब तीन दर्जन जती संचार क्षेत्रका ब्यक्तिहरु थिए । सबैसँग हात मिलाउँदै मन्त्री म उभिएको ठाउँमा अाइपुगे पछी ठक्क उभिईन ‘तपाइलाई केन्यामा स्वागत छ, तपाईं सर्बाधिक रक्तदातासँग भेट गर्न पाउदा धेरै खुशी लागेको छ, तपाईंले हाम्रो देशमा रक्तदान बढाउन साझेदारिको काम गर्नुभयो, अब मन्चतिर जाउँ’ भनिन ।
बिभिन्न क्षेत्रका अतिथिहरुले खचाखच भरिएको मन्च भएको पाल अगाडि उपस्थित भएका सयौँलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथी मन्त्रिले ‘वास्तबमा हाम्रो देशमा वार्षिक १० लाख युनिट रगत चाहिनेमा करीब एक लाख ७० हजार युनिट मात्रै रगत उपलब्ध हुन्छ, हाम्रो देशमा पनि स्वयमसेवी रक्तदानको सँस्कार बसाउनु पर्छ, यस्तो अवस्थामा रक्तदानको क्षेत्रमा उल्लेखनिय काम गरेका विश्व प्रख्यात रक्तदाता अर्जुन मैनालीको अनुभवले हाम्रा केन्याली जनताहरूलाइ रक्तदान गर्न थप उत्साह मिल्नेमा विश्वस्त भएकी छु,’ उनले भनिन्। प्रमुख अतिथी मन्त्रिले सम्बोधनकै बिचमा मलाई परम्परागत केन्याको क्राउन (राजडन्डा, ह्याट र गम्छाले सम्मान गरिन । त्यसपछी मैले बोल्ने क्रममा विश्व भरी रगतकै अभावमा कसैले पनि जीवन गुमाउनु नपरोस भन्दै यो स्वयमसेवी रक्तदान अभियान लिएर आज तपाईंहरु सामु रक्तदान नै गर्न भनेर न्यूयोर्कदेखि आएको छु, ३२ बर्षको अबधिमा मैले १७१ पटक रक्तदान गरी सकेको छु, आज तपाईं सामु तपाईंका जनताको लागि रक्तदान गर्दै छु, अब तपाईं पनि रक्तदान गर्नुहोस, रक्तदान गरेर शरिरमा कुनै कमजोरी हुँदैन, हेर्नुहोस त मलाई, मैले यतिका पटकसम्म अरुका लागि करीब ८५.५ लिटर रक्तदान गरी सकेको छु, मेरो आफ्नै रगतले मात्रै ५१३ जनासम्मलाई बच्चाउन सहयोग हुन्छ’ भनेँ । त्यसपछी उपस्थित ब्यक्तिहरुले ताली बजाएर स्वाबास ब्यक्त गरे । मैले ६ वटै महादेशका १६ वटा देशमा गएर रक्तदान गरी सकेको छु, केन्या मेरो १७औँ देश हो ।
मन्तब्यको कार्यक्रम सकिएपछी एकजना पत्रकारले मलाई बोलाएर अन्तरबार्ता लिन खोजेका थिए । त्यहाँ भएभरका सबै टि भि, रेडियो, अखबारका उपस्थित पत्रकारहरुले मलाई घेरी हाले । मैले किन रक्तदान गरेको, कहिलै कमजोरी हुनु भयो कि, र मैले केन्यामा नै रक्तदान गर्नु परेको कारणहरु सोधेका थिए । उहाँहरुले मबाट रक्तदानमा ठुलो अपेक्षा राखेका रहेछन भन्ने मलाई लाग्यो ।
त्यसपछी रक्तदान गर्ने स्थानमा गएँ । प्रमुख अतिथी मन्त्री रिवन काटेर कार्यक्रम उदघाटन गर्न मलाई पर्खि राख्नु भएको रहेछ, वहाँले मलाई रिवन काट्दा संगै राख्नु भयो । रक्त संचार सेवाकी निर्देशक डा फ्रिदाह गोवेदीले रक्तदान गर्न स्वास्थ्य परिक्षण गर्न लगिन । बिध्युतिय उपकरणबाट मेरो रक्तचाप परिक्षण गर्दा एक अंकले बढी भयो । ला ! अब रक्तदान गर्न नपाउने भएँ भन्ने चिन्तामा परेँ । स्वास्थ्य परिचारिकाले पुन: परिक्षण गरिन । बल्ल तल्ल स्वास्थ्य परिक्षण पास भएँ । रगत दिने मेचमा सुताएपछी मेरो पाखुरा हेर्न मन्त्री आँफै आए । बिगतमा रक्तदान गर्दा सुइ घुसारेको ठाउँमा हेर्दै स्पर्स गर्नु भयो । सायद वहाँलाई यत्तिका पटक रगत निकाल्दाको पाखुरा कस्तो होला जान्ने उत्सुकता थियो कि ? मैले रक्तदान गरी सकेपछी मन्त्री आफ्नो मन्त्रालय जानु भयो । करीब १ बजे तिर रक्त संचार सेवाका पदाधिकारी साथ म पनि दिवा भोज गर्न गएँ । एउटा करीब दुई पाऊ जतिको सिङैगै माछा र ढिडोँ खाएँ । फेरी एक घण्टा जती रक्तदान भई रहेको ठाउँमा बसेँ । हरेक रक्तदाताहरुलाई भेट गर्दै रक्तदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ भनेँ । पाँच छ जनाले त ‘तपाईंको रक्तदान अनुभवले म त साह्रै प्रभावित भएँ अब म पनि बर्षको चार पटक रक्तदान गर्छु’ भने । उनिहरु यस्तो प्रतिकृयाले म साह्रै हर्षित भएँ । मैले यत्राो दु:ख गरेर यहाँसम्म आएको लक्ष पुरा भयो भन्ने लाग्यो । त्यहाँ रक्तदान गर्ने र हेर्नेहरुको पनि ठुलो भिड थियो। रक्तदान गर्न साना साना केटीहरु पनि आएका थिए । मैले अचम्म मान्दै ‘तपाइ पनि रक्तदान गर्ने ?’ सोधेँ। ‘हो’ भनिन । फेरी मैले ‘रक्तदान गर्न त कम्तिमा पनि शारिरिक तौल ५० किलोग्राम हुनुपर्छ नि’ सोधेँ । उनले ‘छु’ भनिन । ‘अनी उमेर त १८ बर्ष भन्दा माथि हुनुपर्छ नि’ सोधेँ । उनले ‘२६ बर्षकी भएँ’ भनिन । त्यहाँका मानिसहरु साना देखिए पनि खदिँला र पाको उमेरका हुँदा रहेछन ।
करीब ४:३० बजे तिर ‘मन्त्रिले वहाँकै कार्यालयमा बोलाउनु भएको छ’ भन्दै रक्तसन्चार सेवाको पदाधिकारीले मलाई मन्त्रालयमा लिएर गए । मन्त्रालयमा सानो सेरोमनी कार्यक्रम राखिएको रहेछ । स्वास्थ्य महानिर्देशक डा जोन मससबी, प्रमुख सल्लाहकार डा प्रशाद लगाएत संचार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु र अन्य गन्यमान्यहरु उपस्थित रहेको थियो । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त रक्तदान कार्यक्रममा पहिलो दिनमै करिब ५ सय जनाले रक्तदान गरेका डा फ्रिदाहले बताएकी थिइन । म आउने समाचारले सायद युवाहरुको राम्रो उपस्थित भएको होला भन्ने मलाई लाग्यो । मन्त्रीले ‘अमेरिकादेखि यहाँसम्म आएर रक्तदान बढाउन साझेदारी गर्नु भएकोमा धन्यवाद छ’ भनिन ‘यस्तो अवस्थामा रक्तदानको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका मैनालीको अनुभवले हाम्रा केन्याली जनताहरूलाइ रक्तदान गर्न थप उत्साह मिल्नेमा विश्वस्त भएकी छु,’ भनिन्। मन्त्रिले ‘रक्तदानको तपाईंको योगदानको उच्चतम कदर गर्दछौ भन्दै’ प्रशंसा–पत्रले सम्मान गरेकी थिइन। मेरो रक्तदान उत्प्रेरणा अभियानले अफ्रिकामा धेरै जनालाई रक्तदान गर्न उत्साहित बनाउन म सफल भएको छु जस्तो लागेको छ । गौरवले मेरो छाती नै फुलेर आयो । धेरै खुशी भएँ । मेरो बुवा जिवित रहनु भएको भए उहाँ कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला !
भोलीपल्ट बिहान पृथ्वीको बिच भाग भुमध्ये रेखामा जाने योजना बनाइ सुतेँ । बिहान ७ बजे डा फ्रिदाहले फोनबाट ‘तपाइको जि बि एस टेलिभिजनमा एक बजे अन्तरवार्ता तय भएको छ’ भनिन । कार्यक्रम थपिएकोले घुम्न जान सकिएन । टिभिमा अन्तरवार्ता दिए पछी पाँच बजे रक्त संचार सेवाकी निर्देशकको कार्यालयमा गई पुरै तीन दिनको समिक्षा गर्यौ । त्यसपछी ति निर्देशक र त्यहाँकी सर्वाधिक रक्तदाता ऐशाले मलाई एअरपोर्टमा ७ बजे पुर्याइ दिनु भयो ।
महिला विश्वकपको उपाधी अष्ट्रेलियालाई, भारत पराजित
पाकिस्तानमा ज्यानमारा वर्षा, १७ को गयो ज्यान
डालासमा एभरेष्ट लायन्स क्लबको जुमबाटै साँस्कृतिक कार्यक्रम